Ukuzamazama komhlaba okungu-8,2-magnific kushaye i-Alaska futhi kudala isexwayiso se-tsunami | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuzamazama komhlaba okukhulu okungu-8,2 kuzamazamise i-Alaska, kudala isexwayiso se-tsunami
Nsuku zonke kuba nokuzamazama komhlaba. Iningi lethu alikwazi ukuzizwa, ngoba zibuthakathaka kangangoba azenzi ukuqhaqhazela komhlaba, kepha kukhona abanye ukuthi ngaphezu kokuzamazama komhlaba kungenza kusebenze i-alamu ye-tsunami, ngaleyo ndlela ikwazi ukudala umonakalo omkhulu. Yilokho okwenzeka kulowo owanyakazisa i-Alaska Namuhla, ngoLwesibili.
Ngobukhulu bamadigri ayi-8,2 esikalini sikaRichter, esisukela ku-0 kuye kwayi-10, le nto iqoshwe yi-US Geological Survey.
Ukuzamazama komhlaba, okwenzeke ngamakhilomitha ayi-10 ukujula, kutholakale amakhilomitha angama-256 eningizimu-mpumalanga ye-Chiniak, idolobha elisogwini olusenyakatho-ntshonalanga ye-Alaska. Okwamanje, akukho okubi ukuzisola, kepha njengoba sishilo, kunesixwayiso se-tsunami esenziwe sasebenza futhi, iziphathimandla zezwe sezinxuse labo abasogwini ukuba bafune isiphephelo. Ngaphezu kwalokho, iPacific Tsunami Warning Center (PTWC) isinxuse ukuba basuke ezindaweni eziphansi.
Kumele kubhekwe ukuthi izexwayiso azisho ukuthi lesi simo sizokwenzeka, kepha lokho kungenzeka. Njengoba i-Anchorage Office of Emergency ibuchaza, "izexwayiso ze-tsunami zisho ukuthi kungenzeka ukuthi i-tsunami enezikhukhula ezinkulu noma isivele yenzekile." Lezi zimo zasolwandle ziyingozi kakhulu, ngoba amagagasi abenza afinyelela kumamitha ayi-19; Futhi okubi kakhulu akukhona lokho, into ebi kakhulu ukuthi bangavela emahoreni ambalwa emva kokuzamazama komhlaba.
Ngakho-ke, ubungozi bukhona futhi ukuvimbela kubaluleke kakhulu. Bakwazi kahle lokhu, hhayi e-Alaska kuphela, kodwa naseBritish Columbia (Canada), ngasogwini lwaseHawaii nasogwini lwase-United States kuze kufike emngceleni weMexico.
Ngiyethemba ukuthi akukho okwenzekayo, kepha uma kwenzeka ekugcineni, uzokwaziswa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Ukuzamazama komhlaba okukhulu okungu-8,2 kuzamazamise i-Alaska, kudala isexwayiso se-tsunami